बेलायतमा नेपाल कपको उपाधि लडाकु बटालियनले चुम्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बेलायतमा नेपाल कपको उपाधि लडाकु बटालियनले चुम्यो
लण्डन । नेपालबाट धेरै टाढाको देश प्रवासी भूमिमा रहेपनि बेलायतमा नेपाली फुटबल प्रतियोगिता निकै चर्चित र आकर्षण बन्दै आएको पाईन्छ। अल्डरसट स्थित क्वीन्स एभिन्यू सैनिक ग्यारिजनको रंगशालामा हरेक बर्ष नेपाल कप फुटबल प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको छ। यो प्रतियोगिता व्रिगेड अफ गोर्खाजमा कार्यरत बेलायती गोर्खा सैनिकहरु माझ मात्र गरिने फुटबल प्रतिस्पर्धा हो।
नेपाल कपको फाईनल खेलमा दोस्रो गोर्खा बटालियनले पहिलो गोर्खा बटालियनलाई ३–२ ले हराउदै नेपाल कप प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको हो। नितान्त विग्रेड अफ गोर्खाजको प्रायोजनमा हरेक बर्ष हुने नेपाल कप प्रतियोगिताको यो बर्ष ६८ औ संस्करण हो।
बेलायतको नेपाली समुदायमा आयोजना हुने सबैभन्दा पुरानो र चर्चित मानिने नेपाल कप नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जंगबहादुर राणाले गोर्खा विग्रेड भारतबाट स्वतन्त्र भएपछि सन १९४७ बाट नेपाल कपको थालनी गराएका थिए।
यो बर्षको प्रतियोगितामा दोस्रो गोर्खा बटालियन, क्वीन्स गोर्खा इन्जिनियर, तालीम केन्द्र क्याट्ररिक, गोर्खा मण्डले, गोर्खा सिताङ, पहिलो गोर्खा बटालियन, क्वीन्स गोर्खा सिङ्नल, क्वीन्स ओन गोर्खा लजिस्टिक रेजिमेन्ट, क्लोज सर्पोट ट्र«प्स्, गोर्खा स्टाफ पर्सनल सर्पोट कम्पनी (जियस पियस), विशिष्ट हतियार स्कुल, टयावेलेटो कम्पनी वार्मिनिस्टर, आर्क बटालिन लगायत १२ टिमले रवाफिलो प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
गत मे मा विग्रेड अफ गोर्खाज मुख्य कार्यलयका परियोजना अधिकृत क्याप्टेन डिल्लीकुमार राईले गोर्खा रेडियो मार्फत खेल तालिका सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त सार्वजनिक समारोहमा वारेन्ट अफिसर टु गंगा गुरुङ्ग समेत उपस्थित थिए। नेपाल कप विग्रेड अफ गोर्खाज भित्र विशेष महत्वपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता मानिन्छ।
प्रवासी भूमिमा रहेका भुपू गोर्खा, कार्यरत गोर्खा सैनिक र सबै नेपालीहरु माँझ भेटघाट र मनोरञ्जन गरिने मुख्य उद्देश्य हुन्। अहिलेको आधुनिक परिवेशमा प्रेमी प्रेमिका, ईष्टमित्र, आफन्त र हितैसी दौंतरीहरु समेत भेटघाट हुने समावेशीताको चर्को उदाहरण बनेको पाइन्छ। झण्डै ७ हजार दर्शक प्रत्येक बर्ष सहभागी रहने प्रतियोगितालाई वियफ वियस गोर्खा रेडियोका प्रस्तोता रुपा राणाले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए।
अल्डरसट सैनिक ग्यारिजनको रंगशालामा २९ जुनबाट नकाउट चरण सुरुवात गरिएको थियो। क्वीन ओन गोर्खा रेजिमेन्टलाई सेमिफाइनलमा हराउदै दोस्रो गोर्खा बटालियन फाईनल खेलमा प्रवेश गरेको हो। दोस्रो गोर्खा बटालियनले सन २०१३ मा टिम प्रबन्धक वारेन्ट अफिसर टु अरुणहाङ नेम्बाङको नेतृत्वमा ईतिहासमै पहिलो पटक नेपाल कपको उपाधि जिताएका थिए। यो बर्ष भने, टिम क्याप्टेन जीवन राई पहलमा इतिहासमै दोस्रो पटक कपको उपाधि हात पारेका हुन्।
शनिबार भएको फाइनल खेलमा पहिलो र दोस्रो गोर्खा बटालियनले फाइनल प्रतिष्पर्धा गरेका थिए। प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा दोस्रो गोर्खा बटालियनका ऋषि थापाले पहिलो गोल गर्दै आफ्नो समूहलाई अग्रता दिलाएका थिए।
पहिलो हाफ खेलको निर्धारित समय ३५ मिनेटसम्म पनि विपक्ष समूहले गोल गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रो गोल उक्त गोर्खा बटालियनले गरेका थिए। उक्त प्रतियोगिताको सर्वाधिक उत्कृष्ट खेलाडी दोस्रो गोर्खा बटालियनका गोल रक्षक म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका छन्।
नेपाल कपको उपाधि
विग्रेड अफ गोर्खाज हङ्गकङ्गमा रहदा विशाल प्रतियोगिता हुने पूर्व भूपु गोर्खा विजय लिम्बु बताउँछन्। नेपाल कपको उपाधि जित्ने खेलाडिहरुलाई बटालियनका गुल्मापतिले खेल मैदानमै पदोन्नति दिन्थे। जस्ले गर्दा खेलाडीहरुलाई सोतह उत्साह र प्रोत्साहन मिलेको स्मरण गराउँछन्।
कालान्तरमा आईरहदा नेपाल कपको क्रेज घट्दै गएको र खेलकुदमा नभएर काममै धेरै व्यस्तता रहेको अनुभव सुनाए। फाइनल खेलको दर्शक दीर्घामा रहेका सुनसरी धरान निवासी लबकुमार राई र बेलायत निवासी टेरी रेन अचानक भेट भएका थिए। उनिहरुले ४५ बर्ष अघि क्वीन्स सिङ्नलबाट खेल खेलेका थिए।
४ प्रतिस्पर्धी समूहले भाग लिएको सो प्रतियोगितामा अवकाश भएका गोर्खा सैनिकहरु भेट्रानतर्फ खेलिने प्रतियोगितालाई काठमाडौं कप भन्ने गरिन्छ। विग्रेड अफ गोर्खाजले सन १९९७ मा हङकङ छाडेर बेलायत आएपछि काठमाडौं कप सुरुवात गरेका हुन्। काठमाडौ कपको फाईनल खेलमा क्वीन ओन गोर्खा बटालियनलाई क्विन्स गोर्खा सिङ्नलले ५–१ को बिरुद्व गोल गर्दै शिल्ड हात पारेको हो।
काठमाडौं कपको प्रतियोगितामा क्विन्स गोर्खा ईन्जिनियर, क्विन्स गोर्खा सिङ्नल, क्विन्स गोर्खा लजेस्ट्रिक र आरजिआर लगायत ४ टिमहरुले रवाफिलो प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतियोगिताको समापन समारोहमा विजेता तथा उपविजेता टीमहरुलाई नेपाल कपका प्रमुख कर्णेल जेम्स् रविन्सनले नेपाल कपको शिल्ड र पुरस्कार वितरण गरेका थिए।
प्रतियोगिताको मुख्य आकर्षण
खेलको उद्घाटन समारोहमा गोर्खा व्रिगेड अफ व्यान्ड र विग्रेडका पाइप एण्ड ड्रम्स्को सयुक्त विशेष प्रस्तुति रहेको कार्यक्रममा च्यारिटी तथा व्यापारिक स्टलहरु, गोर्खा ट्रष्ट, गोर्खा म्युजियम, खानाका स्टलहरु, स–साना नानीहरुका लागि मनोरञ्जनात्मक खेल खेलिने स्थान नेपाल कपका मुख्य आकर्षण रहेका थिए। विग्रेड भेलाकोे रुपमा मानिने प्रतियोगितालाई नेपाली दुतावास लण्डन, गैर–आवासीय नेपाली संघ बेलायत, नेपाली समुदायहरुले समेत साथ दिदै आएका छन्।
बेलायतमा रहेका प्रत्येक नेपालीहरु, नानी केटाकेटी, बृद्वबृद्वा, छोरीचेली र आफ्न्तहरुमाँझ भेटघाट गर्ने शुभ अवसर मिलोस् साथै उक्त प्रतियोगिता खेलाडीहरुको केहि हदसम्म खेलमा प्रगति होस् साथै खेल खेलेर भरपुर मनोरञ्जन मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक बर्ष विग्रेड भेला तथा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल प्रतियोगिताको आयोजना गदै आएको नेपाल कपका प्रमुख संयोजक कर्णेल जेम्स् रविन्सनले बताए।